Golaha wasiirada cusub ee Puntland oo lagu dhawaaqay – Kalfadhi
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa caawa shaaciyay liiska golahiisa wasiirada cusub oo ka kooban 18 wasiir, 21 wasiir ku xigeen iyo 9 wasiir dowle. Agaasimaha guud ee warbaahinta dowladda Jamaal Carab ayaa saxafiyiinta u akhriyay liiska golaha wasiirada.
Xukuumadda cusub waxay u badan tahay xubno ku cusub saaxada, waxaase ka soo dhex muuqday wasiir xigeeno iyo wasiir dowlayaal xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii tan ka horaysay.
Haweenka ayaa xukuumadda madaxweyne Deni waxay ka heleen wasiir buuxa iyo saddex wasiir ku xigeen.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxmaed Cali ayaa hoggaaminayay xukuumad ka kooban 20 wasiir, iyo in ka babadan 30 wasiir xigeeno iyo wasiir dowlayaal ah.
Dhowaan xukuumaddu waxay kalsooni u doonanaysaa golaha wakiillada Puntland oo maanta galay fasax kooban galay inta laga gaarayo ansixinta xukuumadda.
Wakiilladu waxay maanta meelmariyeen in xukuumada loo ansixiyo si wadar ah, waxaase meesha ku jirta in wasiir walba uu golaha ka hor sheegi doono taariikh nololeedkiisa iyo inuu leeyahay baaxad ku filan shaqada loo igmaday, sida uu sheegay gudoomiyaha Baarlamanka Cabdixakiin Dhooba-daareed waxaa arrintaas looga gol leeyahay in wakiilladu hubiyaan shuruudaha dastuurku qorayo ee wasiirka laga rabo.